Kooxaha Suuriya isku haya oo kulan isugu iman doona arbacada berito - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Carl Bildt (M), wasiirka arrimmaha dibadda Iswiidhen
Kooxaha Suuriya isku haya oo kulan isugu iman doona arbacada berito
La daabacay tisdag 21 januari 2014 kl 14.09
Wasiirka arrimmaha dibadda ee dalka Iswiidhen Carl Bildt ayaa ka qeeyb-geli doona kulanka berito oo arbaca ah furmi doona oo xalka loogu raadineyo dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Suuriya, sida uu sheegay Robert Rydberg, ahna madaxa laanta bariga dhexe ee wasaaradda arrimmaha dibadda iyo waddammada dhaca waqooyiga Afrika:
Xaaladda Suuriya waxay ka mid tahay goobaha ey caqabadaha ugu xumi ka aloosan yihiin ee sannadihii ugu dambeeyey. Waxaa carrigaa ka aloo-san khilaaf hor-seedi kara inuu dab bensiin lagu shiday ku noqdop gobolka. Sidoo kale waa caqabad saameeyn ku leh dalka Iswiidhen, maadaama ey dalkan ku sugan yihiin qaxooti fara badan ee ka soo jeedda dalka Suuriya.
Jah-wareer ballaaran ayaa beryahan dambe ka aloosnaa kulanka berito la isugu iman doono intii aanu furmin, halka ey ka kooxo ka mid ah mucaaradku ey kulanka qaadaceen. Iyo sidoo kale kooxo ka mid ah kuwa ugu dhumucda weyn e edagaalka hubeey-san kula jira maamulka Asad ayaa sidoo kale qaadacey kulankax alka loogu raadineyo xaaladda Suuriya.
Dalka Iswiidhen ayaa dhankiisa culeeyska isugu geeyn doona sidii xal siyaasadeed loogu gaari lahaa khilaafka Suuriya ka aloo-san, sida uu sheegay Robert Rydberg:
- Waddo keliya ayaa jirta ee xal looga gaari karo dagaalka carrigaa ka aloo-san. Waa xalka siyaasadda. Sidaa daraadeed ayay muhiimad dalkan ugu leedahay in inuu taageero buuxda siiyo hayadda Qaramada Midoobey (QM). Iyo wakiilka QM ay u xil-saartay howlshaa siduu uga soo dhalaali lahaa. Muhiimadduna maahan oo keliya kulanka berito arbacada ka furmi doona magaalada Montreux, hase yeeshee waxay muhiimaddu tahay tallaabooyinka ka dambeeya ee la qaadi doono, kolka ey garabyada isku haya Suuriya ey ku kulmaan kulan ay hor-jooge ka tahay hayadda QM iyo sidii howlsha halkaa looga wadi lahaa.